at 192-168-1-1 IP Address Info, la heli karo ka http://192-168-1-1l.com, mid ka mid ah waxyaabaha mudnaanta ugu muhiimsan waa gaarka ah ee visitors our. document Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxa ku jira noocyada kala duwan ee macluumaadka in la ururiyo oo la duubay by 192-168-1-1 IP Cinwaanka Info iyo sida aan u isticmaalno.
Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah ama u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah our, ha ka waaban inaad nala soo xidhiidh email ugu jaypol929@gmail.com
192-168-1-1 Cinwaanka IP Info socota nidaamka caadiga ah ee la isticmaalayo files log. files Kuwani gasho kooxda martida marka ay booqato website-. Dhammaan shirkadaha martigelin iyo qayb ka mid ah adeegyada marti samayn’ Analytics. Macluumaadka la ururiyey by files log ka mid ah hab maamuuska internet (IP) cinwaanada, nooca browser, Adeegga Internet Provider (ISP), taariikhda iyo waqtiga stamp, Iyadoo lagu tilmaamayo bogagga bixitaanka /, oo suurto gal ah tirada qasabno. Kuwaas oo aan lala macluumaad kasta oo qofka lagu garan karo waa. Ujeedada warbixinta waa waayo-rogga taxliilin, maamulka goobta, raad users’ dhaqdhaqaaqa bogga internetka ee, iyo ururinta xogta dadka.
Like website kasta oo kale oo, 192-168-1-1 Cinwaanka IP Info isticmaalaa 'cookies'. cookies waxaa loo isticmaalaa in uu kaydiyo macluumaadka oo ay ku jiraan martida’ doorbidida, iyo bogagga website-ka in booqdaha heli ama booqday. Macluumaadka waxaa loo isticmaalaa in ay tayadoodii users ah’ waayo-aragnimo ay Habayn our page web content ku salaysan visitors’ nooca browser iyo / ama macluumaadka kale ee.
Google DoubleClick gamuun cookie
Ogsoonow in 192-168-1-1 Cinwaanka IP Info ma laha helitaanka ama gacanta, kuwaas oo cookies loo isticmaalo by xayeysiiya dhinac saddexaad.
Saddexaad Siyaasadaha Privacy Pary
192-168-1-1 Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah IP Address Info ee ma khuseeyo xayeysiiya kale ama websites. Sayidka, waxa aan idin leeyahay gunta u tasho Siyaasadaha Privacy kala oo ka mid ah server ad dhinac saddexaad wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah. Waxaa ka mid noqon kara dhaqanka iyo tilmaamo ku saabsan sidii aad u dooran-out of fursadaha qaarkood. Waxaad ka heli kartaa liis dhamaystiran oo Siyaasadaha Privacy kuwaas oo xiriir la leeyihiin halkan: Links Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waxaad dooran kartaa in gab cookies iyada oo aad kala dooran browser shaqsi. Si aad u ogaato macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maareynta cookie la daalacashada web gaar ah, waxaa laga heli karaa daalacashada’ websites kala. Waa Maxay Cookies?
Qayb kale oo ka mid ah waxaa mudnaanta la intaa ku daray ilaalinta carruurta, halka la isticmaalayo internetka. Waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta iyo masuuliyiinta si ay u dhawraan, ka qayb, iyo / ama lala socdo iyo hanuunin ay waxqabad online.
192-168-1-1 IP Address Info ma og ururiyaan Information kasta Personal Garan caruurta da'doodu ka yar tahay 13. Haddii aad u malaynayso in ilmahaaga la siiyo noocan oo kale ah macluumaad ku saabsan boggayaga internetka, waxaan si xoog leh kugu dhiirinaynaa in aad isla markiiba nala soo xiriir oo dhan waannu yeeli doonnaa dadaal ugu fiican si aan si degdeg ah ee diiwaanka saari macluumaadka sida.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay khusaysaa oo kaliya in ay hawlaha online iyo ansax tahay muddo visitors to our website la xiriira macluumaadka in ay la wadaago iyo / ama ururiyaan in 192-168-1-1 IP Address Info. siyaasadda Tani ma aha dabaqi karo in macluumaadka laga soo ururiyey offline ama via channels kale oo aan ahayn website this.
By isticmaalaya website, waxaad halkan raali ka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo ku heshiiyaan in ay Shuruudaha iyo Xaaladaha.